Rita, Writing for My Sake!: ကိုယ် နှင့် ဂျူးများ
Posted by Rita at 6/27/2011 11:42:00 AM
ကြာတော့သည်လည်း မောင့်စကားနဲ့ ကျမ၏သစ်ပင် ဖတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ဂျူးဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျနော်ဝေဖန်တာ တော်တော်လေးကို စောသွားတယ်လို့ သတိထားမိတယ်။ =)
ဆက်ချင်မှ ဆက်ပါ ဆက်ရင်တော့ လာဖတ်မည်။ XD
နရသအ လိုလို သူ့ကိုယ်သူ အထင်ရောက် အရူးထနေဟန်တူသော လူထု (ဦးလှ/ဒေါ်အမာ) မျိုးဆက် ဘိုဘိုလင်စမ်း (ဘိုပြား)
What is this link about? I thought this blog owner's at least educated person and something like this indicate it's no difference from all those political blogs full of swearing and defamations. It is worth point out that in Blogger's usage agreement they dont allow or encourage like this sort of abuse and defamation. If you are in certain countries you may get sued. I am justacausual reader who comment on what I observe so it's interesting to see you will just delete this comment straight away.
ဒီပို့စ်တင်ပြီး သိပ်မကြာခင် ခပ်မြန်မြန်တစ်ခေါက်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဂျူးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်က ကိုယ်မဖတ်ရမနေနိုင်အောင် ဆွဲဆောင်ခဲ့တော့ အချိန်သိပ်မပေးနိုင်ပေမယ့် အစအဆုံး ဖတ်လိုက်တယ်။ အခုမှနောက်တစ်ခေါက် သေသေချာချာ လာပြန်ဖတ်တယ် ရီတာ။
ဒီပို့စ်ထဲက စာအုပ်တွေအားလုံး ဖတ်ဖူးတဲ့ကိုယ့်အတွက်တော့ တစ်ခုခုဟုတ်တယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
ဇွန်က ချစ်ခြင်း၏အနုပညာနဲ့ တော့တိုးချန်ကို တစ်ခါမှ နှိုင်းမယှဉ်ကြည့်ခဲ့ဖူးဘူး။ ခုရီတာရေးပြမှပဲ ချစ်ခြင်းရဲ့အနုပညာ နောက်ဆက်တွဲက ဖြစ်စေချင်တဲ့ စေတနာဆန္ဒတွေရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုအပေါ် သေချာစဉ်းစားမိသွားတယ်။
“ကိုယ့်အတွက်တော့ အဲဒီဝတ္ထုနှစ်ခုက မိဘနဲ့ သားသမီး၊ ဆရာနဲ့တပည့်၊ ချစ်သူရည်းစား စသဖြင့် ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်သူ့ကြားမှာမဆိုရှိတဲ့ ချစ်(တတ်)ခြင်းတွေကို ဖွင့်ဆိုပြတဲ့ ခေါင်းနဲ့ပန်းလိုပါပဲ။”
သိပ်ကို အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ မှတ်ချက်တစ်ခုပါပဲ ရီတာ။